China Gold Gravity Knelson Centrifugal Concentrator separator ụlọ ọrụ na ndị na - eweta ya | Rigo
The akpaka Ihapu Centrifugal Gold Concentrator na-akpọ Knelson gold centrifugal concentrator, ma ọ bụ gold centrifuge. A na-ejikarị ya eme ihe iji chịkọta mkpụrụ ọla edo na-enweghị ego site na prọlụ ọla edo ma ọ bụ aja aja ọla edo nke ọla edo site na igwe egweri, dị ka igwe bọọlụ ma ọ bụ igwe pan pan.
Onye na-eche maka Gold Centrifugal na-arụ ọrụ otu ụkpụrụ na Falcon ma ọ bụ Knelson Gold Concentrator, mana ọkara ma ọ bụ 1 na 10 ọnụahịa ha. Enwere ike iji Gold Centrifugal Concentrator ọ bụghị naanị maka ịmịpụta ọla edo, kamakwa maka igwupụta nkume siri ike iji weghachite ọla edo nkịtị, dochie njikọta na iji weghachite ọla edo na ọdụ.
Centrifugal gold concentrator bụ ihe dị ọhụrụ ụdị nnukwu ndọda ịta ahụhụ ngwa. Igwe ndị ahụ na-eji ụkpụrụ nke centrifuge iji mee ka ike ndọda nke nri nri na-enweta nkewa dabere na ngwongwo ngwongwo. Isi ihe dị iche iche nke ngalaba bụ cone nke yiri "uche", na-agba ọsọ na nnukwu ọsọ site na igwe eletriki na a Ihe oriri, nke a na-ahụkarị site na mwepụta bọl ma ọ bụ na-agbapụta mmiri na-agba agba, na-enye nri dị ka slurry na etiti nnukwu efere ahụ site n'elu. Nri slurry na-akpọtụrụ isi efere nke ụgbọ ahụ na n'ihi ntụgharị ya , a na-enupụ ya n'èzí. Mpụga mpụta nke ụlọ nnukwu efere usoro ọgịrịga yana n’agbata otu ọgịrịga ọ bụla bụ uzo.
Na arụ ọrụ, a na-eri ihe dị ka slurry nke mineral na mmiri n'ime efere na-agbagharị nke na-agụnye grooves fluidized ma ọ bụ riffles pụrụ iche iji weghara ihe ndị ahụ. Mmiri a na-ekpochapu mmiri / azụ na-asacha mmiri / mmiri na-ewebata site na olulu mmiri dị na cone dị n'ime iji mee ka akwa ahụ nwee nnukwu mineral. Mmiri mmiri / mmiri na-asacha mmiri / mmiri na-arụ ọrụ dị mkpa n'oge nkewa.
Mmiri azụ mmiri
(n'arọ / oge)
Cone adiana ọsọ
Achọrọ mmiri nrụgide
1) High mgbake ọnụego: Site anyị ule, na mgbake ọnụego maka placer gold nwere ike ịbụ 80% ma ọ bụ karịa, n'ihi na nkume rein gold, na mgbake ọnụego nwere ike iru 70% mgbe nri size bụ n'okpuru 0.074mm.
2) Mfe iji wụnye: Naanị obere ebe achọrọ ka achọrọ. Ọ bụ igwe zuru ezu, tupu ịmalite ya, naanị anyị ga - ejikọ mgbapụta mmiri na ike.
3) Mfe ịgbanwe: E nwere naanị ihe 2 ga - emetụta nsonaazụ mgbake, ha bụ nrụgide mmiri na nri nri. Site na ịnye ezigbo mmiri na inye nri, ị nwere ike nweta nsonaazụ kacha mma.
4) Enweghị mmetọ: Igwe a na-eri naanị mmiri na ike eletrik, na ikpocha oke na mmiri. Obere mkpọtụ, enweghị ndị ọrụ kemịkal.
5) Mfe iji rụọ ọrụ: Mgbe ịmechara mmiri mmiri na nha nri na-edozi, ndị ahịa ga-agbake naanị ụtụtụ 2-4 ọ bụla. (Dabere na ọkwa nke m)
Nke gara aga: Portable Mobile Diesel Engine Stone Jaw Crusher Machine
Osote: Gold ore egweri Wet Pan Mill Machine
Gold ore Ball Mill egweri gburugburu Classifier M ...
Gold Kacha Centrifugal Concentrator mkpoko M ...
Gold Nnukwu jijiji Isiokwu separator Machine
Mining ore igwekota tank Machine
Obere Ball Mill Gold Mercury Amalgamator Barrel
10-20 ton kwa Hourcopper Gold ore Flotation Mac ...
Eletriki Ọkụ Na-agbaze Ọkụ